आज, खेल र खिलौने निर्माताहरु कठिनाई बदलिने को पहेली सबै प्रकारका ग्राहकहरु प्रसन्न हुन्छु। एक सबै भन्दा प्रसिद्ध र लोकप्रिय आज को - बल पहेली Maze "perplexus"। यसलाई संसारभरि दुवै बच्चाहरु र वयस्क प्ले आनन्द।
Perplexus के हो?
यो एक जटिल 3D-पहेली छ। बाह्य जो भित्र धेरै ट्रयाक एक Maze छ स्पष्ट प्लास्टिक कचौरा छ। प्लेयर गरेको कार्य - यो ट्रयाक बन्द छैन उड्यो छ भनेर सबै अवरोध मार्फत एक सानो धातु बल बनाउन।
को "यात्रा" को शुरुवात मा सुरु बिन्दुमा बल सेट गरिएको छ। त्यो, जस्तै labyrinth सबै चरणमा संख्या द्वारा चिनो लगाइएको छ। अर्को तपाईं धेरै ध्यान र चलाखीपूर्ण घुमाउन, झुकाव, आफ्नो हात मा बल मोड बल मार्ग साथ टाढा सार्दा छ भनेर आवश्यक छ। अन्त गर्न Maze पारित गर्न, धेरै गाह्रो प्रयास हुनेछ। केही labyrinth कदम पर्याप्त सरल लाग्न सक्छ, तर अरूको खण्डमा तपाइँको टाउको तोड छ र dexterity को चमत्कार देखाउन।
नेत्रहीन, खिलौना धेरै आकर्षक छ। यो टिकाउ उच्च गुणवत्ता सामाग्री बनेको छ। स्टाइलिश डिजाइन, जटिल मार्ग, समकालीन डिजाइन - एक बल-पहेली "perplexus" ध्यान आकर्षित र तपाईं चाँडै यो टिप्न चाहनुहुन्छ बनाउँछ। खिलौना तह छैन देखि, यो एक यात्रा, एक छुट्टी मा साथ लिन सुविधाजनक छ।
सिर्जना र पुरस्कार को इतिहास
यस्तो बल-Maze सिर्जना को विचार पछिल्लो शताब्दीको 70s मा, लामो समय पहिले जन्म भएको थियो। यसका लेखक Maykl Makginnis थियो। र जो यो प्रयोगकर्ता हजारौं द्वारा विश्वभरिबाट ज्ञात छ फारममा सिर्फ एक खेलौना, डिजाइन र संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रायन क्लेमेंस र दान Klinster मा गरे। को समतल मा पहेली 2008 मा आए। बिक्री को एक दशक भन्दा बढी "perplexus" बेलुन भन्दा बढी तीन दर्जन विभिन्न पुरस्कार मालिक भयो। तिनीहरूलाई बीच - एक मानार्थ पुरस्कार "यस वर्षको खेलौना," देशहरूको संख्या मा पहेली जित्यो जो, साथै पुरस्कार "आमाबाबुले को विकल्प", "विकास" र केही अरूलाई। कुनै आश्चर्य कि खेलौना विभिन्न विभाग मा विजेता बारम्बार चयन। यो पक्कै पनि योग्य हुनुहुन्छ।
के उमेर मा "perplexus 'बल गणना छ?
निर्माता बाहिर पोइन्ट कि माथि6वर्ष, एक पहेली Perplexus मूल (औसत) सामना गर्न सक्नुहुन्छ भएका सबैलाई। साना छोराछोरीलाई लागि त्यहाँ खेल एक सरल संस्करण हो, तर अनुभवी खेलाडीहरूको लागि - जटिल।
यो रमाइलो र बच्चाहरु र वयस्क लागि रोमाञ्चक खेल। एक मात्र प्रयास छ - सिर्फ बल आफ्नो हात मा छ, र खेल म चाँडै अन्त गर्न चाहन्छु, सुरु हुन्छ। कसरी लामो Maze को खण्ड हुनेछ? सबै फरक, तर निश्चित प्रयास छ।
त्यहाँ पहेली, अर्थात् चार धेरै प्रजातिहरू छन्। बच्चा "perplexus" खरीद बल-Maze, तपाईंले खाता आफ्नो उमेर र क्षमता मा लिनु आवश्यक छ। को जटिलता साना खेलाडी लागि धेरै हुन भने, उहाँले मनोरञ्जन चासो गुमाउन सक्छ। खेलौना जो कोहीले indifferent छोड्न सक्षम छैन, यो तत्काल आफ्नो ध्यान पकड लिन्छ र अवरोध को खण्ड को अन्त सम्म यो धारण।
को पहेली को जटिलता के हो?
Perplexus Maze समतल र तीन-आयामी छैन। सबै अवरोध जो खेलको जटिलता होइन्छ, धेरै विमानहरु मा प्रबन्ध छन्। बाधाओं को खण्ड संग ट्रयाक, र धेरै सामेल, खातामा गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण को बल, flanges उचाइ लिन छ। छिटो - केही क्षेत्रको खण्डमा तपाईंलाई बिस्तारै बल रोल गर्नुपर्छ, र अन्य। यस बारे, खेलाडीहरू यातायातका प्रक्रिया मा अनुमान हुनेछ।
एक बल-पहेली "perplexus" र एक लामो खण्डमा लागि डिजाइन गरिएको छ किनभने विकास केही चरणमा मा, एक लामो समय को लागि "अड्केको" हुन सक्छ। यो बल को labyrinth मार्फत थप जाओ के आन्दोलनहरु एक चाल कस्तो, बाहिर आंकडा गर्न समय लाग्छ।
मिति गर्न, निर्माण कम्पनी Maze को4प्रकार उत्पादित। तिनीहरूले जटिलता, आकार, बाधाओं को नम्बर (चरणमा) मा फरक:
1 रुकी - बल जो उमेर4वर्ष देखि पनि छोराछोरीलाई विकास गर्न सक्छौं सरल संस्करण, मा "perplexus"। तर पनि यो वयस्क, यी पहेली संग खेल्दै कुनै अनुभव भएका विशेष गरी ती रोचक हुनेछ।
2. मूल - जटिलता औसत स्तर, 100 कदम को, मौका मार्ग चिन्ह लगाइएको तीन सुरूवात बिन्दुको एउटा सुरु गर्न। यो सबै भन्दा प्रसिद्ध, लोकप्रिय, बिक्री खेल संस्करण हो।
3. महाकाव्य - यो सबै वयस्कहरूको लागि डिजाइन गरिएको छ जो Maze, सबैभन्दा परिष्कृत संस्करण हो। हामीले यो संस्करण मा embarking अघि, खेल को क्लासिक संस्करण मार्फत जाने सुझाव। यहाँ 125 अवरोधहरू र ट्रयाकको विस्तारित लम्बाइ।
4 ट्विस्ट - पनि उन्नत खेलाडीहरू लागि डिजाइन गरिएको छ जो खेल एक प्रकारको। यो सबै अन्य मोडेल देखि एक मौलिक भिन्नता छ। यो तपाईं बस हिँड्न गर्नुपर्छ तर पनि सँगै सडकको व्यक्तिगत तत्व जडान आफ्नै मार्ग खण्डहरूमा निर्माण गर्न एक Maze छ। यो खेल को खण्ड एक, लामो जटिल र धेरै रोचक हुनेछ।
पहेली "perplexus" - जो बल बेच्छ? "Detsky मीर" र प्रमुख अनलाइन रिटेलर - यो सम्भवत इच्छित खेलौना पत्ता लगाउन सक्षम ठाउँमा छ। यो पहेली को बढ्दो लोकप्रियता संग वृद्धि र counterfeits को उत्पादन गरिएको छ। साँचो उत्पादनहरु मिलावटी देखि भेद गर्न प्याकेजिङ्ग गुणस्तर, परिभाषा जानकारी द्वारा stamped गर्न सक्नुहुन्छ। अक्सर, counterfeiting मूल भन्दा धेरै सस्ता छन्। एक नक्कली खरीद को सम्भावना शून्य कम गर्न, यो ठूलो स्टोर मा पहेली किन्न लायक छ।
उपयोगी र रमाइलो
अन्य सबै पहेली जस्तै, बल-Maze "perplexus" विकास खेल बुझाउँछ। यो dexterity, तर्क र स्थानिक सोचाइ, ध्यान देखाउन चाँडै प्रत्येक चरण मार्फत लाग्छ खेलाडीहरू जानुहुन्न। Perplexus तिनीहरूलाई विकास गर्न सक्छन्, जसले धैर्य र लगनशील भई लागिरहेमा जस्ता गुणहरू कमी ती - तिनीहरूले केवल यहाँ आवश्यक छ।
यो पहेली छैन जो खिलौने गर्न indifferent, सोच्न जबरजस्ती, कारण सबैका लागि रोचक अवकाश हुनेछ। एक जटिल Maze पहिलो खण्डमा पछि समय को निकटतम रकम मा लक्ष्य बल ल्याउन प्रयास, गति लागि प्ले गर्ने प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि उमेर बल "perplexus" को एक व्यक्ति को लागि एक अद्भुत उपहार हुन, एक रोचक र मनोरंजक सोख प्रतिज्ञा गर्नेछ।
अंग्रेजी मा पटक को Harmonization
पेरिस: गणतन्त्र वर्ग र यसको इतिहास
निदान, उपचार, लक्षण कम फिर्ता दुखाइ कटि मेरुदण्ड समावेश
सस्ता Strollers कसरी चयन गर्न